China 7050 ALUMINUM SHEET ifektri abakhiqizi | Kaichuang
Ubukhulu: 0.8mm ~ 150mm
Intukuthelo: O, T6, T651
Ububanzi: kufika ku-2200mm (i-OEM / ODM, i-Design Service Inikelwe)
Ubude: kufika ku-11000mm (i-OEM / ODM, i-Design Service Inikelwe)
Qeda: isigayo sekugcineni ophucuziwe
I-Zinc iyisici esiyinhloko sokuhlanganisa ama-alloys angama-7050 ochungechunge, kanye nokwengezwa kwe-magnesium kuma-alloys aqukethe u-3% -75% we-zinc imiphumela ekwakheni ama-alloys aqinisiwe. Umphumela omangazayo weMgZn2 wenza umphumela wokwelashwa kokushisa kwale alloy ube ngcono kakhulu kunalowo we-al-Zn alloy kanambambili. Khulisa okuqukethwe kwe-zinc ne-magnesium ku-alloy, ukuqina kobunzima kuzodingeka kuthuthukiswe ngokwengeziwe, kepha ukumelana kwayo nokucindezela ukugqwala nokumelana nokubhebheka kuzobe kuncipha ngeminyaka. Ngemuva kokwelashwa kokushisa, izici eziphakeme kakhulu zamandla zingatholakala. Inani elincane le-copper-chromium namanye ama-alloys kuvame ukungezwa kulolu chungechunge. Ingxubevange ye-aluminium engu-7050-T7451 iyona ehamba phambili kuma-alloys e-aluminium kulolu chungechunge futhi ithathwa njengeqine kakhulu. Insimbi emnene. Le alloy inezinto ezinhle zomshini nokuphendula kwe-anodic. Ikakhulu esetshenziselwa i-aerospace, ukucubungula isikhunta, imishini kanye nemishini, ama-jigs nezinto zalapho kufakwa khona, ikakhulukazi ezakhiweni zezindiza nakwezinye izakhiwo ezinengcindezi ephezulu ezidinga amandla aphezulu nokumelana nokugqwala. Isetshenziswa ikakhulukazi ezinhlakeni zokukhiqiza izindiza nakwezinye izakhiwo zokuxineka eziphakeme ezidinga amandla aphezulu nokumelana nokugqwala.
Ishidi le-aluminium le-7050 lisetshenziswa kakhulu embonini ye-aerospace, kepha lingasetshenziswa nakwezinye izinhlelo zokusebenza lapho kudingeka amandla amakhulu e-aluminium.
Izingxenye zezakhiwo zezindiza. Ukuze extrusion, UKWAKHA mahhala futhi afe UKWAKHA ipuleti esindayo. Ingasetshenziswa futhi ezinhlotsheni ezahlukahlukene zedizayini, imishini, imishini kanye nozimele webhayisikili ephezulu.
Langaphambilini 6082 ALUMINUM SHEET
Olandelayo: 7075 ALUMINUM SHEET
7050 aluminium ishidi
umphakeli we-aluminium plate
ishidi le-aluminium plate
intengo yensimbi yensimbi ye-aluminium
Umhlinzeki we-China 6061 Aluminium Sheet
I-China 6061 Aluminium Sheet Abahlinzeki
Amafektri e-China Checkered Aluminium Sheets
Ishidi le-T6 Aluminium elidayisa yonke impahla
Abahlinzeki be-Aluminium Sheet Metal Anodized, intengo yeshidi le-aluminium, Eshibhile Aluminium AmaSpredishithi, 7050 aluminium ishidi, intengo ye-aluminium 6061 intengo, I-Tread Plate Aluminium AmaSpredishithi,